Programme PROSPERER » Boeny: efa miomana sahady amin’ny taompamokarana manaraka ireo tantsaha mpamokatra lojy. Fiofanana hamokarana sy hifantenana ambezo Boeny: efa miomana sahady amin’ny taompamokarana manaraka ireo tantsaha mpamokatra lojy. Fiofanana hamokarana sy hifantenana ambezo – Programme PROSPERER
Boeny: efa miomana sahady amin’ny taompamokarana manaraka ireo tantsaha mpamokatra lojy. Fiofanana hamokarana sy hifantenana ambezo
Na dia eo aza ny olana mafy sedraina amin’izao fotoana izao, raha tsy hilaza afa-tsy COVID-19 isika dia samy miezaka mioitra ny tsirairay mba tsy hiraviravy tànana fa hamaha olana hatrany ary handresy ny fahavalo iraisana. Ho an’ny Ministeran’ny Fambolena, Fiompiana ary ny Jono (MAEP), miaraka amin’ny Fandaharanasa Fanoitra PROSPERER dia manaraka izany tondrozotra izany ny tantsoroka izay mety hilain’ireo tantsaha, mpandraharaha madinika, ka homena azy ireo. Ny miasa ihany tokoa no tena filamatra fa tsy hiandry izay fanomezana mandrakariva…
Ny fambolena voamaina, dia ny lojy sy ny katsaka no tena miantoka ny ankamaroan’ny fidirambolan’ireo tantsaha, mpandraharaha madinika aty amin’ny Faritra Boeny indrindra ny distrikan’Ambato Boeny. Mahasarotiny ny Ministeran’ny Fambolena, Fiompiana ary ny Jono tokoa izany : tsy ataony latsa-danja ny mizaha, manaramaso, manjohy ary mamaha ny olana amin’ny zava-misy mandritra ny taom-pamokarana amin’ireo lalampihariana ireo
Ao anatin’izany indrindra, dia fantatra fa isan’ny olana sedraina isan-taona ny fahazoana masomboly hiantohana ny fambolena. Isaky ny taom-pamokarana dia mitebiteby hatrany ny mpamboly… Tamin’ny voalohandohan’ity taona (janoary – febroary) ity aza dia nisedra olana manokana ry zareo nohon’ny fisian’ny tondradrano. Voavaha izany olana izany tamin’ny alalan’ny fanomezana masomboly izay haverina amin’ny taompamokarana
« Mampalahelo fa toa « olana toa tandra vadin-koditra » ny tsy fananana ambezo isan-taona »
Ankehitriny, mba hialàna amin’izay mety ho fahasahiranana, izay toa mandavataona, momba ity ambezo ity, dia natao ny ezaka ho famahana izany : nomena fiofanana ny ireo mpamboly, mpamokatra lojy sy katsaka miisa 228 (ka vehivavy ny 52) tao amin’ny kaominina ambanivohitra 7 (Ambato-Ambarimay, Ambondromamy, Andranomamy, Anjiajia, Ankijabe, Manerinerina, Tsaramandroso) avy ao amin’ny Distrikan’Ambatoboeny. Araka izany dia tena voatsinjara ho an’ireo mpamokatra avy amin’ireo Kaominina tena mpamokatra lojy sy katsaka tokoa izany fiofanana izany. Nampianarina azy ireo nandritra izany ny fomba fifantenana ny masomboly isaky ny taompamokarana. Nomena azy amin’ny antsipiriany ny torolalana feno mba hahazoany fahatoniana bebe kokoa isaky ny taompamokarana. Voalaza ao ireto tsara ho fantatra vitsivitsy eto ambany ireto
Fifantenana ny voa, na taho hangalàna ny ambezo
Ny fikarakaràna manokana ny velaran-tany hambolena
Ny fotoana hambolena izany
Ny fomba fiotàzana ny vokatra
Ny fomba fitahirizana azy mba tsy ho simba ary ho azo antoka fa mbola hampaniriana sy hamokatra tsara
Narahina fampiharana sy sary moa izany fiofanana fifantenana masomboly izany
Indro zaraina eto amin’ity tranokalantsika ity izany torolalàna tsotsotra izany. Azo atao koa anefa ny miantso ny teknisiana mpampiofana raha ilaina izany (Tel 03453_02692)
Toy izao ny fampiharana eny antsaha
Hita ho faly sy feno fanantenana tokoa ireto tantsaha mpamokatra nandritra izany : tena efa mba nanao izany ihany ry zareo –fifantenana masomboly io- saingy toa manandrakandrana kanefa dia taompamokara iray be izao no anaovana fanandramana ka hita ho nanano-sarotra satria zavadehibe eo amin’ny fidirambola ny mety ho fiantraikany raha toa ka tsy manjary. Amin’ity indray mitoraka ity kosa, dia mitombo ny fahalalàna ary ifampizarana izany mba hahatsara hatrany ny famokarana.
Tena ilaina tokoa…
Hita ho faly sy feno fanantenana tokoa ireto tantsaha mpamokatra nandritra izany : tena efa mba nanao izany ihany ry zareo –fifantenana masomboly io- saingy toa manandrakandrana kanefa dia taompamokara iray be izao no anaovana fanandramana ka hita ho nanano-sarotra satria zavadehibe eo amin’ny fidirambola ny mety ho fiantraikany raha toa ka tsy manjary. Amin’ity indray mitoraka ity kosa, dia mitombo ny fahalalàna ary ifampizarana izany mba hahatsara hatrany ny famokarana. Nazoto, mavitrika sady liana ny mpiofana. Tao anatin’ny fenitra ara-pahasalamana takian’ny ady amin’ny COVID-19 indrindra koa no nanatanterhana izany fiofanana (sarombava sy orona, elanelana iray metatra, …) Nahatsapa koa ry zareo, fa tsy misy afa-tsy amin’ny alalan’ny famokarana no hialàna amin’izao fahantrana izao. Fanjohiana ny fampiharana sy fifanakalozana traikefa, momba izany fiofanana izany no tokony hohamafisina sisa. Vahaolana tahaka ny rehetra ihany anefa ireo, mbola azo hatsaraina, mandra-pahazo izay tsara kokoa hatrany, isan-taompamokarana (Marihina anefa fa mamaha ny olana amin’ny ampahany ihany ireo asa voalaza ireo ; satria tena ilaina ny fanavaozana ny masomboly.)
Tsotra ny tanjona : fanatsàrana ny taom-pamokarana, hampiakatra ny fidirambola, hampivoatra hatrany ny fari-piainan’ireo mpamokatra. Faniriana izay iarahan’ny Ministeran’ny Fambolena, Fiompiana ary ny Jono (MAEP), miaraka amin’ny Fandaharanasa Fanoitra PROSPERER misento sy notanterahina hatramin’izay.